Shiinaha Geedaha soo saarayaasha xiirista iyo alaableyda | Mashiinka Dongheng
Lamaanaha degdegga ah
Foostada xudunta u ah
Auger dhagaxa weyn
Noocyada xiirashada geedkayaga
Xiirashada geedaha 'KINGER' waxay leedahay nooca YDH-TS180, kaas oo ku habboon 5-12 ton oo wax qodda, gawaarida gawaarida gawaarida, gadaal dambe iwm.
DARAN IYO ADEEG
Dammaanad hal sano ah oo loogu talagalay silsiladda saliidda.
Waxaan bixinaa taageero farsamo iyo adeegga khadka tooska ah.
WAXYAABAHA SOO SAARKA SARE
Xiirashada geedaha 'KINGER' waxay isticmaashaa aaladda carbide ee la soo dhoofiyay oo leh bir adag oo adag iyo iska caabin wanaagsan oo duug ah Taas ayaa ka dhigaysa mid aan sahlaneyn in la xidho ama la jeexo.
MAKIINADDA SARE EE SARE
Mashiinka weyn ee riixitaanka wuxuu ka dhigayaa jarista geedka 'KINGER' inay leedahay xoog xiirid ballaaran, oo ku habboon xiirashada qoryaha adag.
Blad-qaab-qaas ah waxay ka dhigeysaa habka jarista mid sahlan oo fudud.
Qaab dhismeedka gudbinta isku xirnaanta, sameynta rakibidda iyo dayactirka fudud
Kinger Shear Shear wuxuu caan ku yahay noocyada kala duwan ee mashaariicda dhirta. Marka laga reebo jarista dhirta, jarista geedaha 'KINGER' waxaa sidoo kale loo isticmaalaa goynta laanta geedaha ama hagaajinta geedaha miraha, dhulka ama dib u soo celinta buuraha iwm. , hufnaan sare, wasakh la’aan iwm.
Bixinta & Gaarsiinta
Waxaan ku aqbalnaa bixinta T / T, kaarka deynta, Western Union, MoneyGram, L / C iwm.
Haddii amarku ka hooseeyo 10pcs, waxaan badeecada u geyn karnaa dekedda Qingdao 15 maalmood gudahood ka dib marka la bixiyo. Haddii in ka badan 20opcs, waxaan badeecadaha ku geyn doonnaa 30 maalmood gudahood ka dib markii aan helnay lacagta. Waxaan sidoo kale alaabta u geyn karnaa dekedda aad u baahan tahay .
Waxaan u isticmaalnay faashaddii dubitaanka iyo dusha rinjiga oo siman innaga oo aan xoqin. Qaybaha soo gaadhay waxaa lagu daaweeyaa ka hortagga miridhku. Alaabada dhoofinta waxaa lagu buuxiyaa kiisaska plywooden si loo hubiyo inaanu kuuskuus, miridhku iyo ifafaalo kale inta lagu guda jiro gaadiidka.
In la hirgeliyo fikradda caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka, in la yareeyo isticmaalka caagagga iyo qalabka kale ee baakadaha waxyeelleeya deegaanka.
Waxaan soo saarnay lifaaqyada qodista in kabadan 10 sano. Dhamaan alaabadayada waxay helayaan foomka CE iyo shahaadada ISO oo tayo sare leh oo xasiloon. Intaa waxaa dheer, waxaan aqbalnaa OEM.
KINGER wuxuu leeyahay koox adag R & D, adeegga iibka kahor ee fekerka leh, adeegga iibka kadib. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, waxaan ku bixin karnaa xalal dhameystiran.
Wixii baahi ah ee aad qabtid waxaad jawaab deg-deg ah ka heli doontaa BOQORKA.
Faahfaahinta kor ku xusan waa qeexitaankayaga xiiridda geedka ee tixraacaaga.Waxay ku habboon tahay 5-12 ton qashin qubka / isteerinka isteerinka / dhajinta gadaal dambe iwm.
Wixii su'aalo ah ayaa lagu soo dhaweynayaa inaad nala soo xiriirto.
Hore: Goos goos
Xiga: Madaxa arkay
Naga Haga Wararkii Ugu Dambeeyay
Yantai Dongheng Makiinado Co., Ltd.
Shanxi Wadada Bariga, Qixia Aagga Horumarinta Dhaqaalaha, Yantai, Shandong, Shiinaha